Josoe 24: 14-29 - Ny Baiboly
Josoe toko 24, 14-29
<14Koa matahora an'ny Tompo ary manompoa azy amim-pahitsiana sy fahamarinana; ario ny andriamantra notompoin'ny razanareo tany an-dafin'ny ony sy tany Ejipta, ka manompoa an'ny Tompo. 15Raha tsy sitrakareo kosa ny hanompo an'ny Tompo dia fidionareo anio izay tianareo hotompoina, na ny andriamanitra notompoin'ny razanareo tany an-dafin'ny ony; na ny andriamanitry ny Amoreana izay onenanareo ny taniny. Fa raha izaho sy ny ankohonako kosa dia hanompo an'ny Tompo.
16Dia namaly ny vahoaka, ka nanao hoe: Lavitra anay izay handao an'ny Tompo ka hanompo andriamani-kafa. 17Fa Iaveh Andriamanitsika no nampiakatra antsika mbamin'ny razantsika avy tany amin'ny tany Ejipta, amin'ny trano fanandevozana ary nanao ireo fahagagana lehite be eto imasontsika ary niaro antsika tamin'ny làlana nalehantsika sy tamin'ny firenena rehetra nandalovantsika. 18Iaveh nandroaka ny vahoaka rehetra sy ny Amoreana nonina tamin'ity tany ity. Izahay koa hanompo an'ny Tompo fa Andriamanitsika izy.
19Dia hoy Josoe tamin'ny vahoaka: Tsy mahatompo an'ny Tompo hianareo, fa izy dia Andriamanitra masina, Andriamanitra saro-piaro; tsy hamela ny fahadisoana amam-pahotanareo. 20Raha mahafoy an'ny Tompo hianareo, ka manompo andriamani-kafa dia hifototra izy sy hampahory anareo ary handringana anareo izy izay efa nanao soa anareo. 21Fa hoy ny vahoaka tamin'i Josoe: Tsia, fa hanomp an'ny Tompo izahay. 22Ka hoy Josoe tamin'ny vahoaka: Vavolombelona amin'ny tenanareo hianareo, fa nifidy an'ny Tompo hotompoina. Hoy ny navaliny: vavolombelon'izany izahay. 23Ario àry amin'izay ny andriamani-kafa eo aminareo, ary avereno amin'ny Tompo Andriamanitr'Israely ny fonareo. 24Ka hoy ny vahoaka tamin'i Josoe: Iaveh Andriamanitsika no hotompoinay, ary ny feony no hohenoinay.
25Nanao fanekena tamin'ny vahoaka Josoe tamin'izany andro izany ka nanome didy aman-dalàna azy ireo tao Sikema. 26Nosoratan'i Josoe tamin'ny bokin'ny lalàn'Andriamanitra ireo teny ireo. Naka vato lehibe izy, ka natsangany teo ambanin'ny aoka, teo amin'ny fitoerana voatokana ho an'ny Tompo. 27Dia hoy Josoe tamin'ny vahoaka rehetra: Indro ity vato ity no ho vavolombelona amintsika, fa efa nandre ny teny rehetra nolazain'ny Tompo tamintsika io; ho vavolombeona aminareo koa io, mba tsy handavanareo ny Andriamanitrareo. 28Dia nampodin'i Josoe ny vahoaka samy ho any amin'ny lovany avy.
29Nony afaka izany dia maty Josoe, zanak'i Nona, mpanompon'ny Tompo, tamin'ny fahafolo amby zaton'ny taonany. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0862 seconds